Yaa soo riday diyaraadii rakaabka aheyd Malaysia? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Yaa soo riday diyaraadii rakaabka aheyd Malaysia?
18th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Diyaarad rakaab ah oo ahayed Boeing 777, lagana lahaa dalka Malaysia ayaa shalay ku dul burburtay dalka Ukraine, gaar ahaan meel ku dhow xadka dalkaasi la wadaago Raashiya.
Waxaa shilka diyaaraddaas oo dhacay shalay galab oo khamiis ah ku dhyintay 295 ruux oo isugu jiray rakaab iyo shaqaale, iyadoo diyaaraddu ka duushay caasimadda dalka Holland ee Amsterdam, kuna wajahneyd caasimadda Malaysia ee Kuala Lumpur.
Diyaaraddan oo duulimaadkeedu ahaa MH17 ayaa sida ay sheegayaan goobjoogayaal burburtay, qiiqna ka baxay inta aysan dhulka ku dhicin, taasoo muujinyesa in si ulakac ah loogu dhuftay gentaal, waxeyna ku dhacay goob ay maamulaan fallagada gooni u goosadka ah eek u kacsan dolwadda Ukraine.
Goobjoogayaasha ayaa sheegay iney arkeen meydadka dadkii saarnaa diyaaradda oo hawada duulduulaya, waxaana meydadka iyo burburka diyaaraddu ku kala dhaceen masaafo dhan 15 KM.
Wararku waxay sheegayaan in la heley sanduuqa madow “Black Box” kaas oo ay dhici karto in laga helo macluumaadkii u danbeeyey markii diyaaraddu uu ku dhacay gantaalku.
Dowladda Ukraine iyo maleeshiyaadka gooni u goosadka ee kazoo horjeeda ayaa midba midka kale ku eedeeyey inuu diyaaradda toogtay.
Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa ku eedaysay kooxda goonigoosadka ah ee taageersan siyaasadda Ruushka in ay diyaaradda gantaal la heleen.
Kooxda maamusha Donetski ee dooneysa in ay ka go’aan Ukraine ayaa iska fogeeyey eedenytaas waxaana ay sheegeen in aysan haysan hubka caynkaas oo kale ah ama riddada dheer, ee soo ridi kara diyaarad ku duuleysey joog dhan 10 000 mitir.
R/wasaaraha Raashiya ayaa mas’uuliyadda soo rididda diyaaraddaas dusha uga tuuray dowladda Ukraine.
Madaxweynaha Ukraine, Petro Poroshenko, ayaa sheegay in diyaaradda ay soo rideen wax uu ugu yeeray argagixiso, waxaana uu ku baaqay baaritaan caalami ah.
Dadka ku dhintay shilka diyaaraddan waxaa ku 23 Mareykan ah, 5 ilaa 10 Ingiriis ah iyo ajaanib badan oo kale, taasoo badisay shakiga ah in diyaaradda si kas loo toogtay.
Hogaamiyaha Malaysia ayaa burburka diyaaradda Malaysia ee bariga Ukraine ku soo dhacday ku sheegay inay tahay arrin “si weyn looga naxo”.
Shilka ku dhacay diyaaraddan ayaa kor usii qaadaya dhibaatooyinka heysta shirkadda diyaaradaha Malaysian Arilines, taasoo bishii Maarso 2014 ay ka luntay diyaarad weyn, taasoo ilaa hadda caalamku waayey meel ay cirib iyo jaan dhigtay.
Qisada diyaaraddii la waayey bishii Maarso oo dunada duulimaadka u smayeysay taariikh cusub oo ah in la waayey halka ay ku dhacday ayaa siday 239 shaqaale iyo rakaab ah.
Fowsiyo Yuusuf: Yusur Abrar waxey aheyd qof iska wareersan oo lasoo dirsaday
Dowladda Soomaaliya oo xalay sagootisay Safiikii hore ee Turkiga